Ewe, siya kufuna ukuba zonke ii-odolo ngamazwe ukuba okoko ubuncinane order nobungakanani. Ukuba ufuna ukuba angathengisa kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukuba ukwandisa ubungakanani yakho ukufikelela ixabiso wethu osenyongweni.
Ixesha phambili imalunga neentsuku 7 sikhululwe ngenxa kwaye imali kuphela iindleko kwempahla.
Ukuze production mass
Ixesha phambili ziintsuku 20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu phambili azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Uyakwazi ukwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, T / T, L / C:
Thina iwaranti Amanqwanqwa yethu KUNYE kweeshelfu iminyaka emi-5-Ngaphandle nokusebenza kwabantu engafanelekanga.
Ukuzinikela kwethu ukuba ukwaneliseka kwakho iimveliso zethu. Xa iwaranti okanye akunjalo, oko inkcubeko yenkampani yethu kwidilesi nokusombulula yonke imiba nabaxhamli lokwaneliseka wonke
Njani I ukuyifaka le ntsimbi zilapha phezulu?
Sibonelela zichazwe ukufaka umyalelo osingisele kuzo zonke hlobo kwithala. Ukuba kuyimfuneko, nathi zinika iinjineli iividiyo for free.
Ndinokuphathana njani ngoxolo isicatshulwa ngokukhawuleza?
(1) Ubukhulu yokugcina?
(2) Pallet yokubeka ledayimenshini: Height * Ubunzulu * Ubude?
(3) maleko Zingaphi?
(4) Loading umthamo kwinqanaba ngalinye? (Ukuba kunokwenzeka, ngaba ngobubele undixelele ukuba yintoni na iimpahla zakho?)
(5) I-zibu- umbala?
(6) Bangaphi zokupaka (iiseti)?
Pallet Amanqwanqwa yoMkhuseli , Warehouse Storage ntsimbi zilapha phezulu , Warehouse Pallet Amanqwanqwa System , Pallet Amanqwanqwa kwezibonda , gravity Flow Amanqwanqwa , Warehouse Pallet leposi ,